Minimalist kacay tattoos, yar, caqli iyo xarrago | Tattoo
Minimalist kacay tattoos, yar, qarsoodi ah oo xarrago leh
Nat Cerezo | | Tattoos ee Ubaxyada iyo Dhirta
ka tattoos kacay minimalist iyagu waa cucada. Had iyo jeer fudud, miyir leh oo qurux badan, marka lagu daro lahaanshaha naqshado badan oo suurtagal ah sidoo kale waxaa lagu dhejin karaa meelo badan oo kala duwan.
Qodobkaan waxaan ku arki doonaa sida aan uga faa'iideysan karno kuwan xaraashka. Sii wad akhriska oo waad arki doontaa!
1 Naqshado badan oo ubax keliya ah
2 Meelahee ayaan dhigeynaa ubaxa?
Naqshado badan oo ubax keliya ah
Rose, marka lagu daro ahaansho mid ka mid ah ubaxyada ugu caansan ee suugaanta, shineemooyinka iyo, dabcan, tattoos, waxaa sidoo kale lagu muujin karaa siyaabo badan, siyaabo kala duwan.
Marka la raaco qaabkan, oo ay tahay in natiijadu noqoto mid aad u yar (taas oo ah, inaad umuuqato mid fudud), waxaan helnaa qaar nashqadaha kiciya firfircoonida sawirka leh xariiqyo dabacsan iyo midab taabasho ah. Qaar kale waxay doortaan inay "dhisaan" ubaxyada waxyaabo kale oo aad u yar, sida origami, oo leh khadadkooda nadiifka ah waxay abuuri karaan dhalanteed warqad layaab leh oo faahfaahsan ka soo kacday.
Midabku sidoo kale saameyn ayuu ku yeelan karaa marka la siinayo taabasho yar laakiin si qoto dheer leh- Hooska wanaagsan oo leh laba midab ayaa siin kara midab-dhismeedka ugu yar ee naqshadeyntayaga taabasho muujinaya in ay dhab ahaantii tahay naqshad u muuqata mid fudud, laakiin si fiican loo dhammeeyay.
Meelahee ayaan dhigeynaa ubaxa?
In kasta oo ay umuuqato in tattoos-yada minimalist-ka ay yaryihiin, runtii wey weynaan karaan illaa iyo inta naqshaddu u egtahay kala badh. Sidaa darteed, in kasta oo meelaha cidhiidhiga ah sida curcurada, gacmaha, anqawyada, qoorta ama dhegtu ay ku habboon yihiin xirashada noocan noocan ah, haddana waxaa jira kuwo kale oo iyaguna u shaqeyn kara qaybo yar yar.
Tusaale ahaan, foodda hore, suufka, qoorta, ama lugta hoose ayaa u muuqda meelo waaweyn oo jidhka ku yaal halkaas oo naqshad aad u yar lumaya, laakiin mid leh cabir cayiman ayaa umuuqan doona sifiican.
Tilmaamaha 'Minimalist Rose Tattoo' waa qurux badan, sax? Noo sheeg, ma haysaa wax tattoos ah qaabkan? Noo sheeg wax kasta oo aad rabto faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos ee Ubaxyada iyo Dhirta » Minimalist kacay tattoos, yar, qarsoodi ah oo xarrago leh
Tattoo markab, doon ku safraya si shiraac leh oo shiraaca ka hooseeya shiraac buuxa
Tattoos Caafimaad II: Calaamadaha Daawada